Indlela Yokuthola I-Inthanethi Ekhululekile ku-Android - Khetha Ukuphepha
Micael Engrácia 2018-01-23T05:10:02+00:00
Kwenzeka kanjani? Unayo i-intanethi mahhala ku-Android ngaphandle kokukhokha?
Kulula ... nge-Compression Data.
Ukusebenzisa ubuchwepheshe ezifana ne-VPN's and SOCKS, sakwazi ukuphatha ngendlela ethile cindezela idatha yeselula , iningi lamacala esiwathola 30% Ukulondolozwa.
Akubonakali ukuthi kuningi, kodwa kungase kube umehluko phakathi kokukhokha kabili ekupheleni kwesikweletu sakho.
Okuhlobene:Imisindo yefoni yamahhala (+ ukuncenceza kwe-100.000)
Khona-ke Ngingakwenza kanjani cindezela idatha?
Hlaziya, khona-ke sizobonisa izinhlelo ze-2 internet mahhala ku-Android.
Zonke mahhala Yebo ungabhalisela izinzuzo eziningi, kodwa yisinqumo sakho.
I-1 -Opera Max
Indlela yokuthola i-intanethi yamahhala
Wonke umuntu uyazi isiphequluli esidumile Opera kanye neqembu eliphethe iphrojekthi, njengoba banquma ukudala lolu hlelo lokusebenza lokulondolozwa kwedatha, seliye impumelelo yangempela yomhlaba wonke.
Ku-Google PlayStore uhlelo lokusebenza luvele lubalwe ngaphezulu Ukulandwa kwezigidi ezingu-10.
Nge isikhombikubona esilula kakhulu , singavula ngokuzenzakalelayo idatha yokulondoloza ku-Wifi noma i-3G / 4G.
Isicelo futhi inikeza imali yokugcina imali ukuthi singathola kwezinye izinhlelo zokusebenza, kwezinye sizithola ukulondoloza we-53%.
I-Opera Max ibuye ikunikeze amathiphu ukuthi ungayilondoloza kanjani idatha, njenge-Facebook ngemuva kwalokho uyaqhubeka nokuchitha idatha.
Emenyu yokulondoloza, singabona ukugeleza kwedatha kwezicelo, ku-WIFI noma ku-3G / 4G, kulesi sibonelo esingezansi imininingwane embalwa yadliwa , ngakho akusizi isibonelo amandla eqiniso ye-Opera Max.
Ibuye igxile kakhulu kwisici sobumfihlo, ukuvikela idatha yethu yomuntu siqu wokuvezwa.
Ngoba uxhumano luyi-VPN, uxhumano luyoba kancane kancane.
Kodwa uma ungagcina i-30%, ingabe uzokhathazeka ngempela ngakho?
I-2 - Vikela i-VPN + Imenenja yeDatha yamahhala
Enye uhlelo lokusebenza oluhle oluthandwayo emhlabeni we-Android Ukuxhasa nge-Facebook.
Indlela yokuthola i-intanethi ye-intanethi yamahhala
Kukhona okungaphezu kokulandwa kwezigidi ezingu-10 kanye a isilinganiso esihle.
Amandla wesicelo yilona ukuqapha okunonya mayelana nezinhlelo zokusebenza.
Lokhu kusinikeza ukuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza ezidla kakhulu futhi zisebenza ukusetshenziswa.
Singakwazi futhi ukulungisa uhlelo lwethu lwemininingwane, kulokhu i inkontileka yamanje i-3GB njalo ngenyanga, isebenzisa i-Protect, siqaphele ukuthi sikwazi ukulondoloza ngokulinganiselwa okungaphezulu kuka-30%.
internet mahhala ku-android
Njengo-Opera Max, ukugcina imali , kufanele sikwazi ukukhetha ukuxhumeka kwe-VPN.
Ngemuva kokuthi uxhumano lwenziwa, idatha igxiliwe futhi ivikelwe.
Qaphela ukuthi cishe zonke izixhumanisi ze-VPN isivinini sokuxhuma singase siphume kakhulu.
Isiphetho - Inthanethi yamahhala ku-Android
Kubalulekile ukulondoloza idatha , hhayi nje ukuthi sithole kanjani "internet mahhala"Njengoba sesilondoloze esikhwameni, lezi zicelo ze-2 isilinganiso 30% yedatha.
Abasebenzisi abaningi ngezinye izikhathi bakhononda ngokuthi uxhumano luhamba kancane, kodwa ngokwemvelo kakhulu ngokuba yi-VPN mahhala kakhulu.
Futhi wena, ucabangani ngalawa? izixazululo?